Chavanopinda: Amazon Affiliate Program
Contact Info: Unogona kwatiri kushandisa Contact fomu.
Sezvaunogona kuona, pane zvakawanda turntables pamisika, ebay kana Amazon huru. Asi sei iwe kunhonga kubva yakadaro-siyana zvigadzirwa? Ndizvo mubvunzo guru. Vanhu Vazhinji kuenda Wholesale mumisika uye handizivi kuti anotora chii Vakafanana uye chii chinokodzera navo.
Turntable.com anopa zivo yakakura uye ruzivo kuitira kuti unogona kuwana turntable kuti nezvaunokwanisa zvakanakisisa. Kune kutaura kuti "Sutu pachako kuti uri yeWekumusoro kukosha, sewe sarudza wokugara naye mhosva."
Kune mhando ina turntable wako bhuku uye chikuru vavariro yangu nderokubatsira vanhu kusarudza chii Vakafanana uye chete kupa chakavimbika mashoko. Usati pavanoedza turntable pamusoro pezvitsiga siyana, unofanira kutanga kunzwisisa mabasa avo uye nezvei.